Sida loo nadiifiyo computer wax jila gaabis ah
> Resource > masixi > Sida loo Nadaafadda Computer si aayar ah u fulineynin
Imisa jeer ayaad aad computer mar nadiif ah, ama ma taqaanaa sida loo nadiifiyo computer ? Of sababta, aniga ma hadalka ku saabsan nadaafadda bannaanka iyo waxaan aaminsanahay in aad oo dhan ayaa ku qoysay oo your computer sida nadiif ah sida wax gurigaaga. Halkan ayaan ku hadla ee drive ee adag, sida faylasha junk, maylka adag, cookies, iwm, kuwaas oo u ururay on your computer sanadihii la soo dhaafay iyo sano. Haddii aad marna nadiifinta aad PC sidan oo kale, waxaa lagu jiido lahaa hoos u qaab-naxsan wasakh, oo xataa computer weyn aad leedahay. Maxaad samaynaysaa marka aad kor u nadiifinta kombiyuutarka?
1. qaar ka on drive adag oo cad
2. Defragment wadid aad u adag
3. uninstall aan waxtar lahayn ama barnaamijyada in aad dhif u isticmaali
4. saar files junk, maylka adag, cookies
5. khaladaad diiwaan Repair
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ka eryis on your computer, oo aad u baahan tahay si ay u nadiifiyaan dura, si loo xaqiijiyo qaab ciyaareed weyn ee aad PC. Marka aad ka heli your computer socda gaabis iyo barnaamijyada bilaabaan in ay ka jawaabaan si tartiib ah ama xataa aadan ka soo jawaabin, waxaa la gaaray waqtigii ay u qabtaan nadiifinta computer ah. Si loo yareeyo halista ah ee aan sidaa yeelno gacanta, sida diiwaanka, marnaba aad soo jeediyay in ay wax ka bedel ay naftaada, waxaad isticmaali kartaa software computer nadiifiye , sida Wondershare 1-Click PC Care, taas oo hagaajin karo hawlaha oo dhan isku mar la mid click, badbaadinta waqti dhib badan tahay inaad ku dhex samaysaan mid mid iyo talaabo talaabo ah.
Orod this software nadiifsan PC on your computer, marka rakibaadda la soo gabagabeeyo. Waxaa si toos ah your computer scan doonaa, lagu ogaan karno dhammaan dhibaatooyinka caafimaad ee hadda jira ee aad PC, iyo warar la xidhiidha oo ay la socoto talo wanaagsan ee shay kasta sida hoos ku abuuraan.
Tani waxay ku tusaysaa kooban kooban xaaladda ay iminka ku your computer ee waxqabadka, xasiloonida iyo ammaanka. Waxaad ka arki kartaa faahfaahin dheeraad ah adigoo ah "More", ama gujinaya haayaha bidixda. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa mid ka kaliya click on the "hagaajin NOW" button. Markaasay aad computer la soo buuxda iyo si ammaan ah nadiifin karin.